ROOBLE Oo Markale La Kulmayo Musharraxiinta Mucaaradka + Ujeedka - Wararka Maanta
Home/Wararka Somali/ROOBLE oo markale la kulmayo musharraxiinta mucaaradka + ujeedka
Muqdisho (WararkaMaanta) – Ra’iisul wasaaraha xilka sii-haya ee Somalia Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa lagu wadaa inuu markale maanta kulan gaar ah la qaato xubnaha midowga muysharraxiinta mucaaradka ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa WararkaMaanta u sheegay in si gaar ah labada dhinac ay uga arrinsanayaa sidii loo dhameyn lahaa khilaafka xoogan ee weli ka taagan doorashooyinka 2021-ka, gaar ahaan & sidii ay iskaashi looga yeelan lahaa arrintaasi.
Sidoo kale xukuumadda & musharraxiinta ayaa isla soo qaaday arrimo ay ka mid yihiin banaan-baxa ay abaabulayaan mucaaradka oo lagu ballamay in la qabto 10 cisho gudahooda, iyada oo sidoo kale lagu soo bandhigayo kulankan xogta ay uruuriyeen xubnaha guddiga wadajirka ah ee loo xilsaaray dhacadaadi 19-kii Febaraayo 2021-ka.
Waxaa sidoo kale labada dhinac ay ka wada doodi doonaan skaalinta ay Midowga Musharixiinta ku yeelan doonaan wada-hadallada al xiriira arrimaha doorashooyinka ee lagu wado inay dhowaan ka billowdaan magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya.
kulmayo markale Mucaaradka musharraxiinta Rooble ujeedka Wararka Somali
Iiraan oo shuruud ku xirtay in ay heshiis ka gasho Arrinta Nukliyeerka - Wararka Maanta: Somali News...